Kedu otu ọsọ ọsọ saịtị si emetụta Ego azụmahịa Ecommerce | Martech Zone
Anyị jikọtara usoro mmemme ma mepụta ọtụtụ ngwa ahịa azụmaahịa ahaziri iche na nke ọkaibe maka ndị ahịa e-commerce nke mere ka ụba ego ha bawanye.
Ka anyị nọgidere na-ele ndị ọrụ na-esite na ozi-e site na ntụgharị, anyị chọpụtara ọtụtụ nsogbu na nnabata ha na ikpo okwu ha na-emetụta nke ọma. ọsọ ọsọ - na-akụda ndị ahịa ha iwe na ịtọhapụ ọnụego ịgbago elu - ọkachasị na mobile ngwaọrụ.
Ihe Mere Oji Ghari Oji
Ọ dị oke mma ịrụ ọrụ na nnweta ahịa, njigide, nkwalite, na ịba ụba na-abawanye uru ahịa akpaaka maka e-commerce… mana belụsọ na ọsọ ọsọ saịtị gị na ahụmịhe ịzụ ahịa pụtara ìhè, ị naghị eme ka ihe kachasị mma gị laghachi na ntinye ego ahia. Ọzọkwa, a ga-anwale ebe nrụọrụ weebụ e-commerce gị ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji hụ na ọsọ dị mma mgbe niile:
Yourlọ ọrụ e-commerce gị ọ na-agbanye ngwa ngwa na ihe nchọgharị niile?
Yourlọ ọrụ e-commerce gị ọ na-ebu ọnụ ngwa ngwa na ngwaọrụ mkpanaka niile?
Yourlọ ọrụ e-commerce gị ọ na-ebu ọnụ ngwa ngwa na ngwa desktọọpụ niile?
Yourlọ ọrụ e-commerce gị ọ na-ebu ọnụ ngwa ngwa na mpaghara niile ị na-ejere ozi?
Yourlọ ọrụ e-commerce gị ọ na-ebu ọnụ ngwa ngwa mgbe ị nwere ọtụtụ ndị ọbịa na saịtị gị?
Mepụta arụmọrụ ọsọ ọsọ nke saịtị gị na ịtụ nha mgbanwe na mpaghara ndị a niile dị oke egwu ma nwee ike ịkọwapụta ụfọdụ nsogbu na-egbukepụ egbukepụ nke ga-emetụta mgbanwe ntụgharị.
Adalata Ọnụ site Page Speed
Enweghị ajụjụ ọ bụla gbasara mmetụta zuru oke nke ọsọ peeji mgbe ọ bịara na ọnụego ịhapụ:
E-Ahịa Ahịa Saịtị Na-agagharị
Ndị ahịa anaghị atụ ụjọ n'ụzụ ahịa na ekwentị dịka ha mere n'oge gara aga. E-commerce nke ekwentị dị ezigbo mma… ọ bụrụ na onye ọbịa gị na-ekiri ihuenyo ọzọ ma ọ bụ na mkparịta ụka ma na-azụ ahịa na ngwaọrụ mkpanaka ha, ọsọ gị, na ụzọ ntụgharị ga-arụ ọrụ ọfụma, ma ọ bụghị ya, ha ga-agbapụta kpamkpam ma ọ bụ hapụ ụgbọ ha ' amalitela. Lelee ọdịiche dị n'etiti omume n'etiti ngwaọrụ:
A mobile esenowo karịrị okpukpu abụọ karịa ka ị ga-esi na saịtị karịa desktọọpụ esenowo.
Kedu otu nke ahụ si sụgharịa na omume ịzụ ahịa e-commerce? Ọ bụ nnukwu:
Mmezi 100-millisecond na-abawanye mkpọsa mgbanwe ntụgharị site na 8.4%
Mmezi 100-millisecond na-abawanye mkpọsa nkezi iji uru (AOV) site na 8.4%
Ntinye 100-millisecond na-abawanye akara okomoko nlele ihu akwụkwọ site na 8.4%
N'ezie, ebe a bụ nchọpụta ọmụmụ 4 maka mmetụta nke ngwa ngwa e-commerce mobile:
Amazon ga - efu ijeri $ 1.6 kwa afọ ma ọ bụrụ na ọ na - agba ọsọ ọsọ site na 1 nkeji.
Ableslọ oriri na ọ aụ sawụ hụrụ 10% mmụba na ntụgharị ntụgharị mgbe ọ belatara oge ibudata peeji nke etiti ya na 1 nkeji.
Walmart hụrụ mmụba 2% na ntụgharị ntụgharị maka mmezi ọ bụla nke 1 na oge ibu peeji.
AliExpress belatara peeji ibu oge site na 36% wee hụ mmụba 10.5% na iwu na 27% mmụba na ntụgharị maka ndị ahịa ọhụrụ.
Aldo chọpụtara na ndị ọrụ mkpanaka nwere oge ngwangwa oge wetara 75% karịa ego karịa nkezi na 327% karịa ego karịa ndị na-enwe oge nwayọ.
Kedu ka mkpa Web Speed ​​maka E-Commerce dị?
88% nke ndị ọbịa na-ahọrọ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-ewepụta ahụmịhe arụmọrụ weebụsaịtị.
Ijeri $ 18 na-efu kwa afọ n'ihi ụgbọ ibu azụmahịa gbahapụrụ.
Ndị ahịa na-echeta oge itinye oge n'ịntanetị dị ka 35% ogologo oge karịa ka ha dị n'ezie.
Anyị edeela ọtụtụ ebe na ihe na emetụta peeji ibu oge m ga-agbakwa gị ume ka ị rụọ ọrụ na ọsọ ọsọ tupu ị malitere ịkpọbata ndị mmadụ na saịtị gị.
E nyere ọnụ ọgụgụ na eserese a
Onye ndu ohuru ohuru ohuru Oge Ibu Ibu Weebụ Weebụsaịtị - Ihe Mere Ngwa Ngwa na 2020. N'iji onu ogugu zuru ezu, ihe omuma ihe di nma, na ihe omumu banyere ndi okacha amara, onye ndu a gosiputara mkpa di nkpa maka ebe nrụọrụ weebụ na-ebu ngwa ngwa iji mee ka ndi ahia na ntaneti nwee obi uto ma guzosie ike na ulo oru e-commerce.
Gụọ Ihe Mere Speed ​​Speed ​​na 2020
Tags: Aldoamazonnkezi iji uruibiaghachi udu site na abụọmgbanwe ntụgharịdesktọọpụ ntọghata udumobile azụmahịa ọsọecommerce ekwentịnlele ihu akwụkwọpeeji nke kwa nletastaples